Ibhayoloji, indlela yobomi kunye neminqweno yolwandle | Ngeentlanzi
Namhlanje siza kuthetha ngesinye sezidalwa zaselwandle ezinomdla kakhulu kweli hlabathi. Malunga nayo Ulwandle. Ezi zilwanyana zinembonakalo eyothusayo kwaye engaqhelekanga eyenza ukuba yahluke kwezinye izidalwa ezihlala kwiilwandlekazi nakwiilwandlekazi. Banomtsalane kwaye bayathandwa ngabantu ngenxa yenkangeleko yabo yobuhlobo. Igama lolwandle lolwandle ngenxa yokufana kobuso balo nehashe.
Ukuba ufuna ukwazi yonke ibhayoloji kunye neempawu zolwandle, apha sikuxelela yonke into
2 Indlela yokuphila
3 Izisongelo zolwandle
4 Biology kunye nomnqweno
Izilwandle zolwandle zinomphunga obonakalayo osetyenziselwa ukutya ngcono. Le yenye yeempawu ezenza ukuba zibonakale ngokulula. Nangona bengadadi kakuhle, banokuphila kakuhle kwezinye iindawo zolwandle. Banokuhlala bebonwa bephumla kwaye bequbha ngenxa yokuba badinwa ngokukhawuleza ekubhukuzeni.
Ukutya kwabo okuphambili kwenziwa ziintlobo ngeentlobo zeentlanzi ezincinci kunabo nezinye izilwanyana ezingenamqolo. Zifumaneka kuzo zonke iilwandlekazi nakwiilwandle zehlabathi, nangona zihlala zihlala kwezo ndawo zinobunzulu obuncinci. Njengoko bengadadi kakuhle, baya kuhlala bekwiindawo ezinobunzulu obuncinci kwaye apho banokubakho amathuba okuhlaselwa ngamarhamncwa.
Batyekele ekudibaneni nokusingqongileyo ukuze bakwazi ukuzifihla kwizidlakudla ezinokubakho kwaye ke kunzima ukuzibona. Bakhetha ukungena emanzini ashushu. Kunqabile ukuba ukwazi ukubona ulwandle ngokuthe ngqo ngaphandle kokuba uyntywila kwaye beza kwindawo yakho. Ezona ntlobo zincinci zezi zilwanyana zifumaneka phakathi kwe-intshi kuphela. Ngokwahlukileyo, iisampulu ezinkulu zinokufikelela kwii-intshi ezi-8, yiyo loo nto zithathwa njengezilwanyana ezincinci.
Kunye neelwandle neelwandle kuye kwafunyanwa iintlobo ezingama-40 zolwandle, nangona zigcina iimpawu ezifanayo phakathi kwabo. Kukho umahluko ophawulekayo osebenzela ukuluhlula ngohlobo. Ezinye iintlobo zinokutshintsha umbala ukuze zidibane ngcono nokusingqongileyo. Sisakhono esifana neso chameleon.
Iifosili ezifunyenwe kwizilwandle zolwandle zinqabile, kodwa indala balatha kumaxesha ukuya kwiminyaka ezi-3 ezidlulileyo. Ke ngoko, zizidalwa eziguqukayo kwaye zihlala apha ixesha elide.
Izazinzulu zicinga ukuba ezi zilwanyana zikwazile ukuguquka ukuze ziphile emanzini anzulu ngenxa yomgangatho wazo wokudibanisa nokusingqongileyo. Abazimelanga ngenxa yokudada kwabo, ngenxa yoko, ngaphandle kokubonwa lirhamncwa, liya kubanjwa ngokulula. Ke, baxhomekeke kakhulu kwisakhono sokudibanisa kunye nemibala eyahlukeneyo yendalo esingqongileyo.
Amanxweme olwandle angamadoda athwala amaqanda apho amancinci aya kuqandusela khona. Le yinto eyahluke mpela kuleya uyiqhelileyo ukuyibona kwindalo. Ngokwesiqhelo ziimazi ezithwala amaqanda apho amantshontsho azo aqandusela khona. Kule meko, indoda inokuthiwa "ikhulelwe" kwaye yiyo ephatha abantwana esibelekweni sayo. Ukulinganisa kwabo kunzima kakhulu kunye nayo yonke inkqubo yokuvelisa kwakhona.
Awunakho ukuba selwandle njengesilwanyana sasekhaya, Kuba azizizo izilwanyana eziguqulwe zaya ekuthinjweni. Uninzi lwazo lusweleka kumanqanaba aphezulu oxinzelelo abangelwa kukuthinjwa ixesha elide. Ezi meko ezifanayo zibenza bagule ngokukhawuleza.
Zininzi izilwanyana ezizingelayo ezifuna ulwandle ngolwandle ukuze zibambe ngokulula. Nje ukuba iindidi zibonwe, kuya kuba lula ukuyibamba. Phakathi kwamarhamncwa asongela ezi zilwanyana sifumanayo ii-stingrays, ii-manta rays, oononkala, oonombombiya, njl. Nangona kunjalo, imozulu sesona silwanyana sibalulekileyo kunezinye izilwanyana. Kungenxa yokuba iimeko zokusingqongileyo zibaluleke ngakumbi kwaye zezona zibangela uninzi lweesampulu zabantu abadala.
Njengoko besesitshilo, imozulu yenye yezilwanyana ezizingelayo ezibulala abantu abadala kakhulu. Kungenxa yokuba, ukuba ungqubha kakubi, azikwazi ukumelana nezinye zeemeko zemozulu eziqatha njengamanzi arhabaxa. Ukuba amanzi ahamba ngokuqhubekayo kwaye abangela imisinga eyomeleleyo, akunakwenzeka ukuba ngokubanakho ukudada, ulwandle lungaphila. Badiniwe kukudada ngexesha elifutshane kwaye kufuneka baphumle. Kungelo xesha ke abarhuqelwa ngaphandle baphele besweleka.
Ngesi sizathu, eyona nto iqhelekileyo kukubafumana emanzini angenzulwanga apho kuzolile khona phezu kweyona mozulu imbi. Enye yezona zisongelo zibulala ezi zilwanyana yiminatha yokuloba. Umsebenzi wokuloba kunye neentlobo ezahlukeneyo zokuloba kubangela ukuba kufa amawaka olwandle minyaka le.
Nangona kunjalo, zininzi izibonelelo ezinamanzi olwandle anezinto eziphilayo zendalo. Omnye wemisebenzi yayo kukulawula abanye abantu beentlanzi ezincinci okanye ezingenamqolo. Ngenxa yokufa okukhulu kwezi zilwanyana kule minyaka idlulileyo, abantu ababelawulayo bakhula kakhulu kwaye ukungalingani kuyabangelwa kwezi meko.
Biology kunye nomnqweno
Abantu abaninzi bayazibuza ukuba bazibona njani iilwandle zolwandle. Ukufihlwa kakuhle, zifihla ngokulula kwaye kunzima ukuzibona. Ukuze bangabaphazamisi kwindalo yabo, Kungcono ukuya kwi-aquarium apho banokubonwa khona ekuthinjweni kodwa kwiimeko ezinokusinda kakuhle. I-aquarium yasekhaya ayifani netanki leentlanzi ngaphezu kobungakanani bee-aquariums zorhwebo.
Phakathi kwezinye zezinto ezifunwa zezi zilwanyana sifumanisa ukuba ziyakwazi ukuvelisa ezinye izandi ezinjengokucofa xa kutyiswa kunye nokuthandana ngaphambi komtshato. Olu nqakrazo lubangelwa ngamacandelo amabini ekhayi lakho ahamba ngokuchasene. Izilwandle zaselwandle azinalo ixesha elimiselweyo lobomi. Ngokwesiqhelo ezona zincinci zincinci zihlala unyaka omnye kwaye umyinge weminyaka emi-3 ukuya kwemi-5 ngowona mkhulu.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi ungafunda ngakumbi malunga nolwandle.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » abanye » Ulwandle